पत्थरी झिक्न मनमोहन अस्पताल पुगेका विरामीको मृगौंला नै गायब | Citizen Post News
पत्थरी झिक्न मनमोहन अस्पताल पुगेका विरामीको मृगौंला नै गायब
२०७४ असार २० गते २१:४८
काठमाडौं, २० असार । राजधानीको स्वयम्भूस्थित रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले उपचारका क्रममा बिरामीको मृगौंला झिकेको रहस्य फेला परेको छ । अस्पतालका चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी पत्थरी निकाल्ने क्रममा मृगौंला झिकेको भन्दै पीडितले न्यायको लागि हारगुहार गरेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । पीडित शिवप्रसाद रिमालकाअनुसार मृगौंलामा पत्थरी भएर शल्यक्रिया गर्न मनमोहन अस्पताल पुगेका बेला चिकित्सकले मृगौंला झिकिदिएका हुन् । विदुर नगरपालिका–१२ नुवाकोटका रिमालले मृगौंला झिक्नुको कारण दिन माग गर्दै न्यायका लागि हारगुहार गरेका छन् । पीडित रिमाललाई आफ्नो मृगौंला अन्य प्रयोजनका लागि झिकिएको हुन सक्ने आशंका छ । यो काण्ड बाहिर आएसंगै पटकपटक विवादमा पर्दै आएको मनमोहन अस्पताल फेरी विवादमा तानिएको छ ।
३२ वर्षीय रिमाल कोखामा अत्यधिक दुखेपछि गत जेठ २२ गते उपचारका लागि सो अस्पतालमा पुगेका थिए । उनी एक वर्षअघि मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका हुन् । चिकित्सकले मृगौंलामा पत्थरी भएको भन्दै गत जेठ २५ गते शल्यक्रिया गरेका थिए । उनले भने,‘पत्थरी झिक्दा मृगौंला पनि झिकिएको रहेछ । मलाई थाहा भएन, म अचेत हुंदा मेरी श्रीमतीलाई कर गरेर छ बुंदे सम्झौता भएको रहेछ, मैले डिस्चार्ज भएर घर पुगेपछि मात्र थाहा पाए ।’ उनले आफू वेहोस रहेका बेला परिवारलाई करकापमा पारी गरिएको सम्झौता मान्य नहुने भन्दै पत्थरी झिक्नुपूर्व मृगौंला झिक्नेबारे आफूलाई जानकारी नदिनुको कारण माग्दै न्यायालय जाने बताए । अस्पतालका पक्षबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका डा. रामकुमार अधिकारीले भने,‘बिरामीलाई पहिले नै सबै जानकारी गराइएको थियो । अहिले आएर बागे्रनिङ गर्ने बहाना भएको छ ।’ रिमालको शल्यक्रिया डा. गुणकुमार श्रेष्ठले गरेका हुन् ।
मृगौंला झिक्नुका कारण आन्तरिक रक्तश्राव भनिएता पनि अस्पताल र बिरामीका आफन्तबीच भएको छ बुंदे सम्झौतामा बिरामीलाई अर्को मृगौंला फेर्नुपर्ने भए फेरिदिने, जीवनभर उपचार निःशुल्क गर्ने, हालसम्म लागेको औषधिलगायतका सम्पूर्ण उपचार शुल्क मिनाहा गर्ने, बिरामीका दुई छोराको स्वास्थ्य र शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, बिरामीको श्रीमती र बिरामीलाई पनि निको भएपछि सोही अस्पतालमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र बिरामीको जीवन बिमा गरिदिने विषय उल्लेख छ । गत जेठ २८ गते सम्झौता भएको पत्रमा मिति उल्लेख भएपनि बिरामीका श्रीमती रन्जु रिमालले भने सम्झौतापत्रमा असार ४ गते मात्र हस्ताक्षर गरेको बताइन । चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको विरामीका आफन्तले आरोप लगाएका छन् । पीडित विरामी पक्षले पचास लाखको क्षतिपूर्ति माग राखी अस्पताल निवेदन बुझिएको छ ।